नेपाल आज | ‘मिस्टर इन्डिया २’ बन्दै, को बन्दैछ ‘मोग्याम्बो’?
‘मिस्टर इन्डिया २’ बन्दै, को बन्दैछ ‘मोग्याम्बो’?
काठमाडाैँ – अभिनेता शाहरुख खानकाे पछिल्लाे फिल्म फ्लफ भएपछि गएको एक वर्षदेखि फिल्मबाट टाढा छन् । उनी पछिल्लो पटक फिल्म ‘जीरो’ मा देखिएका थिए । यो फिल्म बक्सअफिसमा असफल भएपछि उनी हच्किएका छन् । अब, उनी फिल्म छनोटमा हतार गर्ने पक्षमा छैनन् । यसबीच, उनले ‘मिस्टर इन्डिया’ को दोस्रो पार्टमा काम गर्ने फाइनल भएको खबर सार्वजनिक भएकाे छ । फिल्ममा अभिनेता रणवीर सिंह पनि हुनेछन् ।
एक अंग्रेजी पत्रिकामा छापिएको रिपोर्ट अनुसार, ‘भारत’ फेम्ड निर्देशक अली अब्बास जफर चाँडै ‘मिस्टर इन्डिया’ को रिमेक बनाउँदैछन् । यसको रिमेकमा शाहरुख खान र रणवीर हुने बताइएको छ । रणवीरले यो फिल्ममा अभिनेता अनिल कपूरको रोल निभाउनेछन् भने शाहरुख ‘मोग्याम्बो’ को रोलमा हुने चर्चा छ । यद्यपि, यसलाई लिएर औपचारिक घोषणा भने भएको छैन ।
रणवीर आफ्नो भूमिकालाई लिएर उत्साहित छन् । शाहरुखले भने यस विषयमा कुनै जानकारी दिएका छैनन् । उनले ‘मोग्याम्बो’ को रोल गर्न राजी भएको खण्डमा दर्शकलाई हेर्न निकै रोचक हुने देखिन्छ । ‘मिस्टर इन्डिया’ पछि अमरीश पुरीलाई ‘मोग्याम्बो’ नामबाट चिन्ने गरिन्थ्यो । फिल्ममा पत्रकारको भूमिका निभाएकी श्रीदेवीको भूमिकाका लागि अभिनेत्रीको भने टुंगो लागेको छैन ।
बोनी कपूर निर्मित तथा शेखर कपूर निर्देशित फिल्म ‘मिस्टर इन्डिया’ मा अनिल कपूर, श्रीदेवी, सतीश कौशिक, अमरीश पुरी र अनू कपूरले प्रमुख भूमिका निभाएका थिए । यो फिल्म सन् १९८७ को दोस्रो सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने भारतीय फिल्म थियो । फिल्ममा अमरीश पुरीले निर्वाहा गरेको ‘मोग्याम्बो’ चरित्रलाई बलिउड इतिहासको सबैभन्दा राम्रो खलनायकमध्ये एक मानिन्छ ।
प्रहरीको तलब काट्ने निर्णयको चौतर्फी विरोध